जापानमा रहेको "द स्ट्याचु अफ लिबर्टी" | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Osaka > जापानमा रहेको “द स्ट्याचु अफ लिबर्टी”
टोक्यो घुम्न आउनु भएका पर्यटकहरुले ओदाईबा घुम्न जानु भयो भने टोक्यो बेको आगाडी “द स्ट्याचु अफ लिबर्टी” ठडिएको देख्न सक्नु हुनेछ। यो स्ट्याचु अमेरिकामा भएको द स्ट्याचु अफ लिबर्टीको रेप्लिका हो। यो ल्यान्डमार्क टोक्योमा हेरिन सकिने धेरै रमाइलो द्रिश्य मध्य एक हो। तर पनि हजुरको मनमा यो स्ट्याचु यहाँ के गरि आएको होला भन्ने पक्कै भएको होला। आज हामि हजुरलाई यसको ईतिहास बताउनेछौ। के गरि यो अमेरिकन आईकन जापानमा आयो होला ? के हजुरलाई थाह छ, जापानमा द स्ट्याचु अफ लिबर्टीको रेप्लिका अन्य ठाउमा पनि छ।
जापानमा भएको अन्य रेप्लिकाहरु मध्ये यो रेप्लिका सबैभन्दा पपुलर छ। किनकि यो टोक्योको पर्यटकहरु आइरहने क्षेत्रमा छ। अचम्मको कुरा अमेरिका जस्तै जापानमा पनि यो स्ट्याचु फ्रान्स र जापानको मित्रताको प्रतिकको लागि बनाईएको हो। १९९८मा यो स्ट्याचु ओदाईबामा अस्थायी रुपमा बनाईएको थियो।
तर यो यति लोकप्रिय बन्यो कि जापनीहरु यहाँ घुम्न आइरहन थाले। त्यसपछि २००० मा यसलाई स्थाईरुपमा स्थापना गरिएको हो। त्यस्पस्चात यो क्षेत्रलाई अझ पर्यटकहरुको माझ मौलाउनेगरि बिकाश गरियो। ओदाईबामा रहेको यो स्ट्याचु हेर्न जान निकै सजिलो छ। युरिकामोमे लाईनको ट्रेन चढेर ओदाईबा स्टेसन ओर्ली पैदल ५ मिनट वा रिन्काई लाईन चढि टोक्यो टेलेपोर्ट स्टेसनबाट पैदल १० मिनटको दुरीमा यो ठाउ अवस्थित छ।
A post shared by 🌶🌶Haru🌶🌶 (@78_charo) on May 7, 2017 at 5:11am PDT
यो लेडी लिबर्टी ओईरासे सहरमा पनि छ। यो सहर जापानको उत्तर पश्चिम कोस्टको होंशु क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो स्ट्याचु, ईचोउ पार्कमा रहेको छ। यो पार्कलाई लिबर्टी पार्क पनि भनिने गरिन्छ। यो स्ट्याचु पूर्ण फर्निश गरिएको छ। यो चार तल्ला अग्लो छ। यो स्ट्याचु यहाँ बन्नु पछाडी निकै रमाईलो कारण छ। जापानिज सहरहरुले सारकारबाट आफ्नो सहरमा पर्यटक प्रवर्धनको लागि लगानी गर्न बजेट पाउने गर्दछन। यो ओइरासे सहर न्युवोर्क सहर संग मिल्ने ल्याटिट्युड लाईनमा रहेको छ। त्यसैले यो सहरले स्ट्याचु अफ लिबर्टी बनाउने निर्णय गरे। हुन पनि यो स्ट्याचु बने पछि यहाँ पर्यटखरु बढ्न थाले।
A post shared by 武藤 伸樹 (@nobukimuto) on Mar 17, 2017 at 5:00pm PDT
जापानिज सहरमा रुफटप बिलबोर्ड थुप्रै ठाउमा देख्ने गरिन्छ। यी बिल्बोर्डहरु निकै क्रीएटिभ हुने गर्दछन। कुनै कुनै बिल्डिंगमा हजुरले असाही बियरको “फ्लेमिंग हर्ट” वा ठुलो पाचिन्को बल देख्नु भएको होला। तर ओसाकाको स्ट्याचु अफ लिबर्टीले बिज्ञापनको हदनै पार गरेको छ। यो स्ट्याचु ओसाकाको न्यु ओसाका डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ. यो एउटा ठुलो स्टोर छतमा रहेको छ. न्यु ओसाका अमिरिकन सामानको लागि निकै पपुलर ठाउ हो। १९७०को दशक तिर अमेरिका बाट समानहरु जापानमा आयात गर्न थालिएपछि यहाको आर्थिक स्थिति निकै माथि बढेको थियो। त्यसपछि यो ठाउलाई अमेरिकामुरा पनि भनिन थालियो। यो स्ट्याचु चाही १९८४मा न्यु अमेरिकन प्लाजा माथि बनाइएको हो।
अमेरिकामा द स्ट्याचु अफ लिबर्टीले राजनीतिक, इमिग्रेसन, इण्डिपेण्डेन्स जनाउने भएता पनि जापानमा भने यी स्ट्याचुलाई कमर्सियलाईज गरिएको छ। यसले जापानीहरुको अमेरिका प्रतिको मोह देखाउछ। जापानको फ्रान्सको मित्रताको प्रतिक स्वरुपबनेको यो स्ट्याचु अहिले आएर पर्यटकहरुले झुमिने गरेको छ। ओदाईबा टोक्यो बेमा रहेको हुनाले र यसको छेउ छाउ धेरै थरिका मल र मनोरंजन सेन्टर भएकाले यो टोक्यो बासिन्दाको गो टु गन्तब्य पनि रहेको छ।